“O RY HERITIANA A !” -
AccueilTresaka“O RY HERITIANA A !”
“O RY HERITIANA A !”
25/11/2016 admintriatra Tresaka 0
Saika tapaka hatramin’ny lalan-dràn’i Heritiana (radio RTA) mihitsy rehefa nifanehitra tao Mahazoarivo ny alarobia folakandro lasa teo. Hay ve izany ka misoko mangiana mila ravin’ahitra amin’ny mpitondra ihany ireto mpanao gazety mpanenjika fanjakana mivondrona ao amin’ny “miara-manonja” ireto e! Hafa ny ambara ho rem-bahoaka fa hafa kosa ny fihetsika any ambadika. Hany herin’i Heritiana dia ny niaro tena sy nanome tsiny ireo mpiara-dia sy mpiara-miasa aminy ka nilazany mihitsy aza hono hoe tokony hifampiresaka fa samy mpanao gazety ary efa miteny amin-dry zalahy foana aho hoe tsy mety io ataonareo (mpiara-miasa aminy no tiany ambara) manenjika namana io. Nanadio tena mafy tokoa ity ranamana ity kanefa voaporofo fa “mpandevin-tay an-tsalaka” araka ny fomba fitenenana. Natahotra mafy angamba i Heritiana fa ho ankalazaina io fisokoany mangiana mifanantona amin’ny mpitondra fanjakana io. Izay ilay tonga amin’ny fitenenana manao hoe “aleo henjehin’ombalahy toa izay henjehin’ny eritreritra!”.
Marina tokoa fa misokatra amin’ny olon-drehetra ny mpitondra fanjakana ary mbola tsy nanidy varavarana. Ireo mpanao gazety avy amin’ny mpanohitra no nisafidy ny tsy hifandray amin’ny mpitondra ary raisin’izy ireo ho famadihana ny antsoin’izy ireo ho “tolona” mihitsy izany mihaona amin’ny mpitondra fanjakana ary izany no mety nampiasa loha mafy an’i Heritiana ndrao ho fantatry ny mpiara-dia aminy fa mifandray tsara amin’ny mpitondra fanjakana ny tenany na dia hafa aza ny fihetsika ivelany asehony. Mampalahelo ny olona manana toe-tsaina tahaka ity namana mpanao gazety iray ity, mpandefona ivoho sady mpihatsaravelatsihy. Atao ahoana fa kisendrasendra iny fifanenana tao Mahazoarivo iny!
Tsy misy manenjika na manome tsiny ny fanapahan-kevitr’i Heritiana amin’ny fifandraisany manokana amin’ny mpitondra fanjakana (na dia miafina mafy amin’ireo mpiara-dia aminy aza) fa izy tenany no nenjehin’ny eritreriny ka nitady izay fomba niarovan-tena. “O ry Heritiana a!, aleo henjehin’ombalahy toa izay henjehin’ny eritreritra e!
Hentitra ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly manoloana ireo tsikera mandeha, amin’ny filazana fa mandeha foana ny filoham-pirenena mitety an’i Madagasikara” avy any Maintirano aho dia izao indray mitsidika anareo aty Amparafaravola, ary mbola ho ao ...Tohiny